Umhlobo Wenene FM Inkqubo ndaba / current affairs · SABC News and Current Affairs - iono.fm
Umhlobo Wenene FM Inkqubo ndaba / current affairs
SABC NEWS AND CURRENT AFFAIRS | Podcast , ±11 min episodes every 3 days	|
APHA - UMXHOLO
NgoLwesibini wale veki umbutho ongekho phantsi kukarhulumente iSakeliga ubuthetha nekomiti yasepalamente ejongene nengqesho nemiba yabasebenzi, ngomthetho oyilwayo kamakulinganwe ngokwengqesho, iEmployment Equity Amendment Bill ukutsho. Lo mthetho uyilwayo unika amagunya kumphathiswa wesebe elijongene negqesho nemiba yabasebenzi, okuba enze utshintsho kwicandelo labasebenzi, kwaye kunikwe ingqwalasela abantu abamnyama abanemfundo enomsila emsebenzini. Lo mbutho uvakalise izinto ezintathu onengxaki nazo malunga nalo mthetho uyilwayo, neziquka ixesha oziswe ngalo, iziphumo zeenjongo zalo mthetho, nokwahlulwahlulwa koluntu ngokwentlanga nento uMzantsi Afrika ofuna ukusuka kuyo.
Phantse ibengumyinge we4.8 yezigidi zabantu beli loMzantsi Afrika abangekenzi mabango kwimali yomhlalaphantsi, nekuqikelelwa ukuba ifikelela ku42 billion yeerandi, ngokweenkcukaca manani zegunyabantu elilawula amaziko emali, iFSCA ukutsho. Nyaka nonyaka kuye kumiliselwe amaphulo okukhangela abanini bemali ekulondolozo lwengxowamali yomhlalaphantsi. IFinancial Sector Conduct Authority ibongoza abemi beli ukuba bangene kubuxhakaxhaka balemihla (Online) bakhangele kwidatabase yabo, ukuba akungebi ubani unemali ekolugcino kusini na.
Umbutho weDemocratic Alliance uphakamise umthetho oyilwayo iCadre Deployment Bill, ozakwenza ukuba ibe lulwaphulo mthetho, ukuqeshwa komntu onesikhundla kumbutho wezopolitiko kumasebe karhulumente. Lo mthetho uyilwayo uzakuyalela ikomishoni yenkonzo zikarhulumente iPublic Service Commission, ukuba imilisele umqathango wokuba ukuchongwa kwabantu kwizikhundla kwenziwe ngokulungelwa kwabo ezozikhundla kuphela. Lo mthetho uyilwayo uzakwenza ukuba ibe lulwaphulo mthetho ukuchongwa komntu esikhundleni ngenxa yokuthembeka kwakhe kumbutho othile wezopolitiko, ngaphandle kokuba usilungele isikhundla eso kwaye unesakhono sokwenza umsebenzi lowo. Ukwanika amagunya kwi-PSC ukuba ithathe amanyathelo ngakumagosa angazithatheli ngqalelo iziphakamiso zayo.
LIVE - WSU STUDENTS
Idyunivesithi iWalter Sisulu kwiMpuma Koloni, ingqinile ukuba kubekho uphazamiseko kwiinkqubo zale dyunivesithi kunye nokonakaliswa kwezinto, ngenxa yoqhankqalazo lwabafundi kwiikhampasi eziquka iBuffalo City, iGcuwa kunye naseMthatha ngoLwesihlanu weveki ephelileyo. Kuxwebhu lwezikhalazo olufakwe kwiikhampasi ezimbini zale dyunivesithi, abafundi bavakalise ukungaxoli kukulibaziseka kwimiba ephathelene nokubhalisa, iziphumo, kunye nemali ekhutshwa yingxowa mali exhasa abafundi uNSFAS yokutya kunye neyeencwadi phakathi kwezinye.Ukuva kwicala labafundi emnxebeni sibambe umongameli webhunga elikhokele abafundi iSRC ukutsho, kwikhampasi iBuffalo City eMonti, uPhelo Mathentamo.
LIVE- WSU PROTESTS
Idyunivesithi iWalter Sisulu kwiMpuma Koloni, ingqinile ukuba kubekho uphazamiseko kwiinkqubo zale dyunivesithi kunye nokonakaliswa kwezinto, ngenxa yoqhankqalazo lwabafundi kwiikhampasi eziquka iBuffalo City, iGcuwa kunye naseMthatha ngoLwesihlanu weveki ephelileyo. Kuxwebhu lwezikhalazo olufakwe kwiikhampasi ezimbini zale dyunivesithi, abafundi bavakalise ukungaxoli kukulibaziseka kwimiba ephathelene nokubhalisa, iziphumo, kunye nemali ekhutshwa yingxowa mali exhasa abafundi uNSFAS yokutya kunye neyeencwadi phakathi kwezinye.
Abasebenzi bakarhulumente bazakususwa basiwe kwezinye iindawo kwakumasebebe karhulumente ngaphandle kokuthandiswa kubo, ukuba oku kwenziwe kuqwalaselwe iimeko zomsebenzi lowo kufuneka bewenzile kulondawo bathunyelwa kuyo, phantsi komthetho oyilwayo opapashwe ngolwesibini wale veki. Isihlomelo kumthetho oyilwayo iPublic Administration Management Amendment Bill ukutsho, siyayiphelisa into yokuba kufuneka kusatyelwe kwaye kuvunyelwane nabasebenzi bakarhulumente ukusiwa kwezondawo isebe ligqibe ukubasa kuzo. Kungokunje ngokomthetho osebenzayo, amasebe karhulumente angaphakamisa kuphela ukuba abasebenzi mabasiwe kwezinye iindawo phakathi kwamasebe, kodwa ukuba abasebenzi abavumi akukho nto enokwenziwa ngamasebe. Isebe leenkonzo zoluntu nolawulo lithi amagunya okutshintsha abantu bafakwe kwezinye izikhundla, kuzakwenziwa kuba kuzanywa ukuqinisa ulawulo nokuphucula iindlela amasebe asebenza ngayo.
ZYK-LIVE TRADITIONAL PROJECT
UNombuyiselo Zinco ngumseki wenkqubo yemisebenzi yezandla ezinze eGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Le nkqubo ngumsebenzi wezandla wokuthunga iimpahla zesintu kunye neentsimbi. Lo msebenzi wasekwa ngonyaka ka-2012, kwaye ujolise ekuphuhliseni ekuhlaleni izakhono ekuhlaleni, kwanokugxoth'ikat'eziko. Okudume kakhulu ngoMama uZinco, sisiganeko samva nje, sokuthungela nokunxibisa igqala lomfundi weendaba zesiXhosa e-SABC, uMama uNoxolo Grootbom, ngethuba ebefunda iindaba okokugqibela, kuba ethatha umhlala phantsi. Ukuva banzi ngoku, masamkele emnxebeni u Nombuyiselo Zinco ngenkqu…
ZYK-LIVE WSU BOOK
Umongameli wokuqala wentando yesininzi eMzantsi Afrika, ushiya umqela oyimfundiso kweli lizwe. uMonwabisi Maxabela ushicilele incwadi eguqulelwe kulwimi lwesiXhosa enesihloko esithi "Nelson Mandela uphuncuka bemphethe", ngonyaka ka-2021, nalapho ezoba umdlalo obonakalisa indlela uTata uMandela evalelwa entolongweni nalapho kuwiswa khona isigwebo. Ukuva banzi ngoku, emnxebeni sibambe uMONWABISI MAXABELA eMpuma Koloni nozakusichazela banzi ngalencwadi…
Ikomishoni ejongene nokukhuphisana ngokufanelekileyo kweli iCompetition Commission, ikhuphe ingxelo namhlanje malunga nophando lwecandelo lothutho lukawonke-wonke eMzantsi Afrika. Le komishoni yathi yasungula olu phando kuba ikholelwa ukuba kukho iinkqubo zeli candelo ezingathintela ukhuphiswano olufanelekileyo. Olu phando luqhutywe kwizithuthi eziquka iibhasi, iitaxi noololiwe. Ezothutho lelinye lamacandelo asentloko kule komishoni. Kwintetho engobume besizwe uMongameli Cyril Ramaphosa wathi ukuze eli likulungele ukukhuphisana namazwe ehlabathi, lixhomekeke kumgangatho wamazibuko kunye nemizila yoololiwe yeli. Ukukhutshwa kwale ngxelo kuza kanye ngethuba eli loMzantsi Afrika lijamelene nomngeni wokuphucula nokumilisela isicwangciso sokuvuselela uqoqosho lweli.
ZIBUZWA- SOTYO PANSALB
INTRO: Ibhodi ejongene nokuphuhliswa kweelwimi kweli, i-Pan South African Language Board (PANSALB) ngamafuphi, ivakalise amazwi ovelwano ngakusapho lombhali nengcali kulwimi lwesiXhosa unjingalwazi Sizwe Churchill Satyo. Unjingalwazi uSatyo ubenegalelo elikhulu ekuphuhliseni nasekuphakamiseni ulwimi lwesiXhosa ingakumbi kwi-grama. Ubengumbhali weencwadi zesi-Xhosa eziliqela eziquka ezi zilandelayo: Igrama Noncwadi lwesiXhosa, Uphengululo lwesiXhosa, Etshatile engatshatanga kwakunye nethi Sasinoncwadi Kwatanci, ayibhale nabanye ababhali nezinye. Ukuva ngamagqabantshintshi ngobomi bakhe negalelo lakhe ekuphuhliseni isiXhosa phulaphula nanku uXolisa Tshongolo ophuma kwibhodi ejongene neeLwimi kweli
ZYK-LIVE TOURISM MODEL
Unobuhle ophuma eHankey, kufuphi nedolophu yaseBhayi, eMpuma Koloni uzakumela uMzantsi Afrika kukhuphiswano loonobuhle kwihlabathi, uMiss Model of Tourism World, oluzakusindlekwa kwilizwe laseJamaica. Olu khuphiswano lolokuqala ngqa kwaye lujolise ekugqamiseni ukhenketho, amasiko, kwanokuphuhlisa ulutsha kwihlabathi jikelele. Ukuncokola ngokunabileyo ngolu khuphiswano, emnxebeni sibambe unobuhle weli othabatha inxaxheba kolukhuphiswano, uXolisa Maseti...
ZYK-LIVE ANTI RACISM
Le veki iphawulwa njengeveki yokulwa ubuhlanga eMzantsi Afrika. Oku kwenzeka ngexesha eli lizwe lisondele kusuku lokuphawulwa kwamalungelo oluntu, ngomhla wamashumi amabini ananye kule nyanga ka-March. Izolo kuvulwe iqonga lonxibelelwano kusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla, nalapho bekuxoxwa ngobuhlanga kweli lizwe, namalungelo oonondaba kwanokunciphisa umkhethe xa kupapashwa iindaba. Ukuva banzi ngoku sikrwece u-Mary Papayya, ongusihlalo ojongene namalungelo oonondaba, kwiqonga labahleli beendaba i-SANEF ukutsho, nobesisithethi kule ndibano yayizolo…
7 May #PODCAST Labour law expert @jazlaw24 explains his concerns over issues of workplace burnout
8 May Today marks 25 years of the adoption of the 1996 South African Constitution